“Maanta Somaliland Waxa U Bannaan Fursad Ay Heshiis Kula Gasho UAE Oo Military-Base Ka Samaysanaya Berbera” |
“Maanta Somaliland Waxa U Bannaan Fursad Ay Heshiis Kula Gasho UAE Oo Military-Base Ka Samaysanaya Berbera”
safiirka Somaliland u fadhiya dalka Maraykanka Cabdirashiid Gaaruf ayaa qormo uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ku taageeray heshiis ay Somaliland la gasho Imaaraadka Carabka, kaasi oo Saldhig Milatari ay ka siiso madaarka Berbera iyo nawaaxigiisa. Ambassador Rashiid Gaaruf waxa uu ku taliyay in si taxadir leh loo galo heshiiskaas iyadoo laga eegayo danta qaranka ugu jirta, balse aan laga eegeyn shillimaad. Qormadan uu soo dhigat bartiisa Facebook-ga oo dhammaystiran ayaa u dhignayd sidan:
DJibouti waxa ay la gashay heshiiska military-base in looga sameeyo Faransiiska, Maraykanka, China, iyo Saudi Arabia. Wali kamaynu maqlin qaylo iyo sawaxan ka socda oo lagaga doodayo miyaynu ogolaanaa mise Waynu diidnaa. Sababtu waxa weeye dimuqraadiyadda ka jirta Somaliland kama jirto DJibouti. Laakiin waxa marag ma doonta ah in dawlada DJibouti ay samaysatay saaxiibo xoog badan markii heshiisyadan ay la gashay dawlado waawayn.
Maanta Somaliland waxa u bannaan fursad ay heshiis kula gasho UAE oo military-base ka samaysanaya Berbera. Waan fahmi Karaa dooda dadkeena dhexmaraysa labada dhinacba, laakiin su’aashu waxa weeye ma waxa aynu noqonaynaa qaran baqda oo dhuunta oo ka baqaya in cidi u soo dhowaato, mise waxaynu noqonaynaa qaran caalamka wax la qaybsanaya, khatar wixii ay la kulmaana u waajahaya sida caalamkuba u waajaho wixii la kulma. Somaliland noqon mayso qaran kabadh lagu xidho oo ka baqata inay heshiis la gasho wadamada jaarka ah iyo cidkastaba.
Waxan anigu ku talinayaa oo aan taageerayaa in heshiiska UAE ee Airportka Berbera la galo. La galo gorgortan fiican oo dadkeena iyo qarankeenaba u keenaya waxtar dhaqaale iyo shaqooyin oo wanaagsan. Dadkeena ma u shaqo tegayaan UAE, ictiraaf ma helaynaa, dhaqaale ma helaynaa, waar airportka isticmaalkiisu muxuu soo kordhinayaa aan ka wada hadalo. Laakiin in heshiiska la galo iyo in kale yaynaan ka wada hadlin. Waayo taasu waa qaran dumis toosa.
Waayo waxaynu ku jiraa maanta heer jiritaankeena laysku haysto oo muran xoogani ka taagan yahay, markaa maanta innaga waa maxay muhiimada ugu wayni, ma qaranimadeenaa mise waa Shilimaad laga helo dekadda iyo Airportka? Haddii qaranimadu muhiim inoo tahay, heshiiska ha la galo, gorgortan ha lala galo UAE oo wixii aynu geli karayno ha laynoo soo qaado. Laakiin heshiis caalami ah aynu la galno UAE taasoo xoogaynaysa qaranimadeena. UAE ha lagu Khasbo inay tababar iyo hub culus siiso ciidamada booliskeena iyo inay dhaqaale iyo mashaariic kale ka fuliso qarankeena.